Ixesha kunye nabahlobo 35
Kutheni le nto inyoka ithathwa ngendlela eyahlukileyo ngabantu abahlukileyo? Ngamanye amaxesha inyoka ithethwa njengommeli wobubi, ngamanye amaxesha njengophawu lobulumko. Kutheni le nto umntu enoloyiko lwendalo lweenyoka?
Imfundo noqeqesho inento yokwenza nendlela umntu azithathela ngayo iinyoka kunye nazo zonke ezinye izidalwa. Kodwa kukho into endodeni ngokwayo ngaphandle kwemfundo yayo ebangela konke okunye. Inyoka inokuthathwa ngokufanelekileyo njengobuhlungu kunye nobubi okanye njengophawu lobulumko. Kuxhomekeka kwindawo yokuma ethathiweyo. Ngaphandle kwentshabalalo yenyoka ezinye inyoka ezityela kuyo, ayaziwa ukuba iinyoka zinika naziphi na izibonelelo ezizodwa emntwini nakwilizwe, okanye ukuba zibonakalisa nayiphi na imikhwa emangalisa ngakumbi kunezinye izilwanyana, okanye zibonisa iimpawu zobukrelekrele ngaphezu kwezinye iifom zezilwanyana. Ngokuchasene noko, ngamanye amaxesha bazizithulu kwaye abaziimfama; banokuzigwagwisa bade bayokuzibandakanya ekuzibandezelweni, bangakwazi ukuzikhusela okanye baphume engozini, kwaye ukulunywa ziinyoka ezinye kunokubulala kangangokuba emva nje kokuba ixhoba lilunywe. Kodwa zimbalwa kakhulu iinyoka ezingalunganga, kwaye ukunyakaza kwenyoka kuphakathi kwezona zintle kwaye zikhawuleze kunazo zonke izidalwa.
Akukho nto eyenziwa yinyoka okanye nayiphina injongo eyikhonzayo enokuqinisekisa ukuba kuthethwe njengona silumkileyo kwizidalwa okanye njengophawu lobulumko. Ukanti kwasekuqaleni kwamaxesha isoseji sele sithethe ngazo kwaye nezibhalo ziyikhankanya njengobulumko kunazo zonke izidalwa, kwaye yayisebenzisa njengophawu lobulumko.
Zininzi izizathu zokuba inyoka isenokubizwa ngokuba luphawu lobulumko. Ngcono kunaso nasiphi na esinye isidalwa esimele inyoka, inxulumene kwaye iqhutywa ngumbane wombane wendalo, lawo mandla anika umntu ubulumko, xa umntu ezenza akulungele ukuyifumana. Kwimeko yangoku yomntu akafanelanga kwaye akanakho ukuba la mandla enze into ngqo ngaye. Umzimba wenyoka wenziwe ngendlela yokuba uvumele isenzo ngqo sombane. Kodwa amandla awaniki bubulumko kwinyoka; isebenza kuphela ngomzimba wenyoka. Ingqondo iyimfuneko ukuze uqaphele kwaye usebenzise ubulumko. Le inyoka ayinayo. Inyoka inomzimba wesilwanyana ogqibeleleyo kunye noqoqosho. Ikholamu ibaleka yonke inyoka, kwaye yikholamu esebenzisa amandla ombane kuyo. Umqolo kumqolo okwimo yenyoka, kodwa umgogodla emntwini awuyi kuvumela amandla ombane ukuba asebenze ngawo ngokuthe ngqo ngenxa yokuba okwangoku kucinyiwe kwikholam yomgogodla kusetyenziswa okwangoku imithambo yethambo lomqolo ukubekwa komzimba ngaphandle kwembambo kubekwa. Ulungelelwaniso lwangoku lwezinzwa kunye nokusetyenziswa kweeseli zemithambo-luvo zithintela amandla ombane endalo iphela ekusebenzeni ngokuthe ngqo emzimbeni kunye nokukhanyisa ingqondo yomntu. Kwimimandla yesisu kunye ne-pelvic yomzimba izintso zidityanisiwe, zenziwe ngathi yinyoka. Ezi nerve ngoku zibonelela ngamalungu okuzala ngamandla abo esenzo. Kuthiwa kwiincwadi zaseMpuma ukuba kundalini, amandla enyoka, ahlanganiswe ngaphakathi emzimbeni kunye nokulala; kodwa ukuba xa la amandla enyoka evukile iya kukhanyisela ingqondo yomntu. Ukutolikwa, oku kuthetha ukuba imisinga ethile yemithambo-luvo yomzimba, ngoku engasetyenziswanga okanye engasetyenziswanga kakuhle, kufuneka ibizelwe kwisenzo sabo esifanelekileyo; Oko kukuthi, ziya kuvulwa kwaye zidibaniswe ngentambo yomgogodla. Ukwenza oku kufana nokujika kwesitshixo kwibhodi yombane ejika yangoku kwaye iqale umatshini ukuba usebenze. Xa kuvulwa okwangoku kwaye kuhambelana nentambo yomzimba emzimbeni womntu amandla embane avuliwe. Oku kuqala okwenzekayo ngokusebenza ngeemvakalelo zomzimba. Ukuba umbutho wemithambo yomzimba awunamandla kwaye kufanelekile ukutsha okutsha kutsha. Ngokwendlela yokungafezeki, kuyakwenza ukuba umzimba ugule, ungalungelelaniswa, uvelise ubuhlanya okanye ubangele ukufa. Ukuba umbutho we-nerve ulungile kwaye amandla ombane enza i-astral form body kwaye ke icacisa kwaye ikhanyise ingqondo, ukuze iphantse iphaphame ngokukhawuleza ingqondo iyazi ngayo nayiphi na isifundo malunga nehlabathi lomzimba okanye ilizwe le-astral. La mandla anokuhamba kwenyoka kwaye isebenza ngokuhamba kumgogodla ngaphakathi komqolo, okwindlela yenyoka. Njengenyoka, amandla aya kumbangela afe umntu owukhulayo aze angakwazi ukuyilawula. Njengenyoka, amandla akhula enomzimba omtsha aze anikezele ubudala njengoko inyoka itya ulusu lwayo.
Umntu unoloyiko lwendalo lwezilwanyana kuba isilwanyana ngasinye ehlabathini sikwisimo esikhethekileyo somnqweno emntwini, kwaye isilwanyana esoyikwayo ngumntu sibonisa indlela ekhethekileyo yomnqweno wakhe ongakhange uyisebenzise. Xa inkosi kwaye ikwazi ukulawula umnqweno wayo indoda ayisoyiki isilwanyana kwaye isilwanyana singoyiki kwaye singonakalisi mntu. Umntu woyika inyoka ngokwemvelo ngenxa yokuba engalunganga kwaye engakwazi ukulawula amandla akuyo inyoka. Ukanti inyoka inomdla emntwini, nangona esoyika. Uluvo lobulumko luyabukeka emntwini. Kodwa kuya kufuneka woyise uloyiko kwaye ayithande inyaniso ngaphambi kokuba afumane bulumko, kungenjalo, njengamandla afana nenyoka, iya kumtshabalalisa okanye imenze isidenge.
Ingaba kukho inyaniso kwiibali ukuba iiRicicrucia zakha zibane izibane? Ukuba kunjalo, zenziwa njani, zenzeni iinjongo, kwaye zingenziwa kwaye zisetyenziswe ngoku?
Akukho sizathu sivakalayo sokuba kutheni iRosicrucians okanye amanye amaqonga eendaba akufuneki ukuba enze kwaye asebenzise izibane ezihlala zivutha. Isizathu sokuba namhlanje sicinge ukuba izibane ezivuthayo zihlala ziyintsomi eziveliswe ngentsomi, ikakhulu kungenxa yemibono yethu yokuba isibane kufuneka sisisitya esinezinto ezinokutsha, ezinje ngeeoyile neoyile, okanye kusetyenziswa ukukhanya kwerhasi. , okanye udlula ngoku umbane odlulayo kwaye ukhanyise ngokunyuka kobushushu beefilimu. Umbono wesibane ngowokuba, ukukhanya kukhutshwa.
Isibane esiguqisiweyo esihlala sisitshisa iiRosicrucians sicingelwa ukuba asinangqondo kuba sicinga ukuba isibane asinakukhanyisela ngaphandle kwamafutha okanye into ebonelelwe kuyo. Kucingelwa ukuba isibane esihlala sivutha sisinye sezinto ezininzi ezinokwenzeka ezinokubakho kwizithethe eziphathelene namaxesha eRosicrucian kunye namajelo eendaba.
Asinokwazi ngoku ukuba iRosicrucian okanye amadoda athile akudala aphakathi enza njani isibane esihlala sivutha, kodwa umgaqo onokusetyenziselwa wona ungacaciswa. Masiqale iqondwe ukuba isibane esihlala sivutha asisebenzisi ioyile okanye irhasi kunye nezinye izinto eziyimfuneko ekuboneleleni ngoomatshini. Umzimba kunye nefom yesibane esihlala sivutha sinokuba yinto enokuthi isetyenziswe kwisibane siza kubekwa yingqondo ngubani oyamkelayo aze ayenze. Inxalenye ebalulekileyo yesibane zizinto ezithile ezinikezelwa ngazo ukukhanya. Ukukhanya kufakwe kwi-ether okanye ukukhanya kwe-astral. Ayiveliswa yinkqubo evuthayo. Izinto ezisetyenziselwa ukuhambisa ukukhanya kufuneka zilungiswe ngononophelo kwaye zihlengahlengiswe okanye zihambelane ne-etheric okanye ukukhanya kwe-astral. Ukulungiswa kwezi zixhobo kunye nokuhendelwa kunye nohlengahlengiso lwaso kwi-ether okanye ukukhanya kwe-astral yenye yeemfihlo zeRosicrucians kunye neFilosophers yoMlilo. Ukuba yonke le nto ibikho, ngoku ibonakalisiwe ngokufunyanwa kwe-radium. I-Radium ibonakala inika ukukhanya ngaphandle kokuzitya okanye ukunciphisa ubuninzi. I-Radium ayenzi njengoko imelwe kukukhanya ngokwayo. Ukukhanya kufakwe kwaye kugxilwe kwi-radium. Ukukhanya okubonakala ngathi kuchithwe yiradium kuvela ukukhanya kwe-ether okanye ye-astral. I-radium isebenza njenge-medium kuphela apho ukukhanya kuziswa khona kwihlabathi le-astral kwaye kubonakaliswe kwiimpawu ezibonakalayo.
Isixhobo apho kuye kwakhanya ukukhanya kwezibane ezihlala zivutha zeeRosicrucians zacwangciswa kwimigaqo efanayo nangona yayinokulungiswa ngendlela eyahlukileyo kwaye inokuba yayikwinto eyahlukileyo kune-radium, njengoko kukho iintlobo zemicimbi ngaphandle kokukhanya ukusuka kwi-ether okanye kwihlabathi le-astral linokubonakaliswa kwihlabathi elibonakalayo.
Izibane ezihlala zivutha zinokwenzeka ukuba zakhiwe ngeenjongo ezininzi ezahlukeneyo. Isibane esenzelwe injongo enye singenakubekwa kuzo zonke izinto ezisetyenziselwa ukwenziwa kwezibane. Yiyo loo nto umzekelo, i-radium inika ukukhanya, kodwa i-radium ayisasetyenziselwa ukukhanya kuba ayisiyo kuphela ulungiselelo lwayo oluziindleko kakhulu ukuba isetyenziswe ekusetyenzisweni okunjalo, kodwa ngenxa yokuba ukukhanya kukhanya kulimaza kufutshane nemizimba yezilwanyana.
Nazi ezinye zeenjongo zokuthi izibane ezihlala zivutha zinokuthi zenziwe kwaye zisetyenziswe: Ukukhanyisa kwindibano eziyimfihlo; ukujonga kunye nokuphanda kwihlabathi le-astral kunye namanye amancedo alo; ukugcina kude neempembelelo ezichaseneyo kunye nezigqeba ezichasene nomsebenzi ebewenziweyo okanye omnye; ukukhusela umzimba kunye ne-astral yomzimba ngexesha lokulala okanye ngelixa ulele; njengendlela yokunyanga iintsimbi xa kuhanjiswa; njengendlela yokulungisa iindlela ezithile zokunyanga ngeenjongo zonyango okanye ukwenza iziqalekiso; ukuhlengahlengisa amandla omzimba kwizinto ze-astral okanye zangaphakathi ngaphakathi ekunokuthi kungenwe kuzo.
Ezinye izibane ezihlala zivutha zinokwenziwa ngoku, kodwa nangona zinokwenziwa kwixesha elizayo akuyimfuneko ukuzisebenzisa ngoku. Zisetyenziselwe imisebenzi yengqondo okanye ye-astral kunye neenjongo. Ixesha lomsebenzi onje lidlulile. Ingqondo yendoda kufuneka ikhule ngaphandle kwezi zinto zinjalo. Yintoni eyayilawulwa ziindlela ze-astral ezinokuthi kwaye kufuneka zilawulwe ngoku ngengqondo kwaye ngaphandle kwezinye iindlela kunaleyo inikezwe yimizimba yomntu. Ingqondo kufuneka ibe kukukhanya ngokwakho. Umzimba wayo kufuneka usisibane. Indoda ifanele ilungiselele umzimba wayo kwaye iwuzise phantsi kolawulo lwengqondo ukuba ingqondo iya kukhanya ngayo kwaye ikhanyise ilizwe elijikeleze umhlaba, kwaye yenze ngendoda ebonwa isibane esihlala sivutha esiya kukhanyisa ukukhanya ngalo lonke ixesha.